Iindaba-Ungayicwangcisa ngokwenyani iShit yakho ngezi zinto zingama-45 zeGenius
Sincoma kuphela iimveliso esizithandayo kwaye sicinga ukuba nawe uya kufumana inxalenye yeentengiso kwiimveliso ezithengiweyo kweli nqaku, elibhalwe liqela lethu lezorhwebo.
Kukho izibonelelo ezininzi zokucwangcisa indawo yakho.Kwelinye icala, ungayifumana lula into oyifunayo ngaphandle kokukrazula yonke idrowa exineneyo okanye ikhabhathi. uxinezeleko kwabanye abantu.Ngamanye amaxesha ufuna nje ikhaya elicocekileyo kuba uneendwendwe ngaphezulu.Nokuba siyintoni na isizathu, kukho izixhobo onokuzisebenzisa ukoyisa obona bugxwayiba bombutho.
Ingaba ikhabhathi yakho yesinki yimfumba yeemveliso zokucoca ezingacinezelayo endaweni? Kutheni ungazami ishelufu yomququzeleli elungelelanisiweyo esonga le mibhobho ngobuchwephesha? njengesithethi seBluetooth.Mhlawumbi udiniwe ekucoceni inkunkuma yakho yokupheka.I-pan yokuqhotsa i-splash guard inokuba yinto nje yokugcina igrisi ingatshizi kwaye inciphise imisebenzi.
Ke nokuba ukhangela igajethi ephefumlelweyo yehacker okanye isitayile sokupheka esinesitayile sokukunceda uhlale ucwangcisiwe, olu luhlu luzele ziimveliso ezixakeke kakhulu yiloo nto kanye oyifunayo.
Lo mphathi akakwazi nje ukugcina iibhetri zobukhulu obahlukeneyo (i-93 ukuba ichanekile), kodwa inokuzivavanya ukuqinisekisa ukuba zisebenza ngokufanelekileyo.Yenziwe ngeplastiki - ngenxa yoyilo lwayo, inokugcinwa ngokuthe tye okanye ixhonywe eludongeni. .Plus, ine-10,000 ye-five-star ratings.
Ezi bhokisi zefriji zingasetyenziselwa ukulungelelanisa amaqanda, iziqhamo, iitoti zesoda, kunye nokunye.Njengoko zenziwe ngeplastiki ecacileyo kunye nezibambo ezakhelwe ngaphakathi, kulula ukujikeleza kwaye ubone izinto ezininzi ozifunayo ukuzithenga. re even shatterproof - kwipakethi, ufumana imigqomo emithandathu (kubandakanywa noyilo olune olwahlukileyo).
Amacandelo edrowa asuswayo ayindlela entle yokunciphisa ubumdaka.Faka le pakethi yabaququzeleli bedrowa ezisixhenxe, ezibonisa imigqomo emine yobukhulu obuhlukeneyo obulungele ikhitshi, igumbi lokuhlambela, okanye i-vanity.Ibhonasi: Le migqomo ineepadi ze-silicone ezine emazantsi ukuya bancede baqinisekise ukuba bahlala endaweni emva kokubekwa.
Gcina uludwe lwakho lwezinto oza kuzenza lusendleleni ngale bhodi yokucima ngumagnethi.Inamathela ngokuthe ngqo kwisikhenkcisi sakho, kwaye neon chaki yosula icoceke ngokupheleleyo xa ulungele ukucima kwaye uqale phantsi.Nokuba ugcina uluhlu lokuthenga olusebenzayo izikhumbuzo zemisebenzi yasekhaya okanye ikhalenda, uya kuba nalo lonke ulwazi oludingayo.
Endaweni yokuqokelela ihodgepodge yeziqwenga ezingahambelaniyo, zama le seti yezixhobo ezilithoba zasekhitshini.Yenziwe ngesilicone ekwazi ukumelana nobushushu kunye nentsimbi engaxutywanga, isixhobo sokulungelelanisa esinesitayile siya kujongeka sicwangciswe kakuhle ekhitshini lakho.Akufunekanga bazikrwelele iimbiza neepani zakho, kwaye umqheba ngamnye uza nomqheba we-silicone okhululekileyo.
Yenziwe nge-bamboo, lo mququzeleli wedrowa unokwandiswa, ukuvumela ukuba wenze ngokwezifiso ukulingana nobukhulu bedrowa.Izantsi liphathwa ngezibambo ezine ezingatyibilikiyo ukuze kuqinisekiswe ukuba lihlala endaweni emva kokubekwa.Plus, ifumaneka ngobukhulu obuthathu obuhlukeneyo. kwaye ine-4.7-star rating kwi-Amazon.
Ungasebenzisa esi sikhululo sokutshaja ukulungelelanisa izixhobo zakho zokutshaja.Inamazibuko amathandathu e-USB, ngalinye libonelela nge-2.4 amps yamandla.Plus, libonisa izahluli ezikhanyisiweyo ukuze ukwazi ukupakisha ngokulula nangokukhuselekileyo isixhobo ngasinye.Ikwafumaneka ngemibala emihlanu: emnyama, ezimhlophe, blue, isilivere, kunye nentsimbi.
Ukuba ujongene nokuphuphuma kweimeyile oza kuzihlela, iincwadi zokubhalela uzipakishe, okanye iifayile oza kuzifihla, lo isenokuba ngumququzeleli wedesktop obumlindile. Yenziwe ngentsimbi yomnatha, kwaye itreyi nganye itsalwa njengedrowa, ngoko ke. ungafumana lula nantoni na oyifunayo.
Kuphephe inkathazo yokufikelela kwisikhongozeli esingemva kweshelufu nalo Livila uSusan-ubetha nje zonke ezinye iibhotile ezikwinkqubo.Yenziwe ngoqalo, le turntable ineeshelufa ezimbini ezijikelezayo ukuze nantoni na oyifunayo ifikeleleke.Hlamba nje izandla zakho. ngesepha namanzi xa kuyimfuneko.
Ukulungiselela ukutya kwangaphambili kunye nokuzisa isidlo sasemini ekhaya kuneenzuzo ezininzi, njengokugcina imali kunye nexesha.Ukuba neendlela zokupholisa ezithembekileyo kunokunceda ukugcina oko kutya kutsha, apho le seti yeepakethi ze-ice ingena khona.Iquka uluhlu lweepatheni zegraphic ezinesibindi, ezi pakethe ice BPA-free kwaye ugcine ukutya kwakho efrijini iiyure.
Ingaba unenqwaba yeembadada zonyaka okanye isithende esiphakamileyo, aba baququzeleli bezicathulo ezincinci baya kukunceda uhlale kunye.Inye inamacandelo angama-12 ukuze ukwazi ukugcina ngokulula izibini ezingama-24 phantsi kwebhedi. Ndiyabulela kwi-zippers ehlala ixesha elide kunye ne-top see-through top. , ungakhetha ngokulula isibini osikhangelayo.
Qeda ubuxhakaxhaka beofisi ngale bhokisi yokugcina ifayile.Ithatha ngokulula ileta- kunye nephepha elinobungakanani obusemthethweni kunye neefolda, kwaye inolwakhiwo olomeleleyo olunemiphetho eyomeleleyo.Ide iza nomqheba wokuthwala lula ukusuka eofisini ukuya ekhaya.
Endaweni yokupakisha isihluzi sakho sepasta, ungakhetha le kliphu-kwi-strainer, ethatha indawo encinci ekhabhathini yakho.Isixhobo sokupheka se-silicone yenzelwe ukuqhotyoshela embizeni okanye kwipani yakho phambi kokuba ucoce amanzi, kunye nabathengi abangaphezu kwe-13,000. bayinike i-Amazon yeenkwenkwezi ezintlanu.Kwakhona, ifumaneka ngemibala emihlanu.
Ukuba imoto yakho ithanda ukuqokelela kancinane ukutya kunye nenye inkunkuma, cinga ngokufakela le toti yenkunkuma yemoto. Iza nekliphu ekulula ukuyifakela, kwaye iyavuza ukunqanda ukuchitheka. Ngaphezu koko, umphezulu unemagnethi ithetha ukuba ingasetyenziswa njengento epholileyo okanye ivalwe nje ukuze kungangeni amavumba.
Gcina ubugcisa bakho kunye neengcebiso ezicwangcisiweyo kunye nale seti yeengqayi zeglasi.Ingqayi nganye encinci iza ne-cork yokutywinwa, kunye ne-twine kunye ne-kraft labels ukuze ukwazi ukuchonga izinto zakho okanye uzinike njengezipho.Ukuba awuthandi iilebhile zephepha. , ungasebenzisa izitikha ezibandakanyiweyo kunye netshokhwe.
Ukulungelelanisa indawo yakho ngamanye amaxesha kuthetha ukufumana iindlela ze-chic zokubonisa izinto zakho ukuze zingabonakali njenge-clutter.Ezi thalafu zesitayile ezidadayo zenziwe ngamaplanga kwaye zibonisa i-retro-shaped design.
Ukugcina indawo yakho ekhanyiswe ngokufanelekileyo kuyindlela enhle yokugcina umkhondo wempahla yakho, kwaye ezi zibane zokukhanya ezingaphantsi kwekhabhinethi zinokukunceda ukuba wenze oko (ngelixa ukongeza isitayela esincinci) .Uluhlu ngalunye luneenyawo ezi-3 ubude kwaye lubonisa ii-bulbs ze-LED ezilinganayo. Beka nje iibhetri kwakhona kwaye uziqhoboshele ngokuncamathelisa okunikiweyo, kwaye ulungele ukuhamba nokukhanya okujonge ngamehlo.
Ukuba ungumntu oneedrowa zasekhitshini eziphuphumayo, uncedo lusendleleni.Lo mququzeleli wempahla yasekhitshini ulapha ukugcina izinto zicocekile.Iziintshi ezi-7 x 7 ububanzi nobude, kwaye yenziwe ngentsimbi eqinileyo, ukuze ukwazi ukuyizalisa. phezulu ngaphandle kokukhathazeka malunga ne-tipping.Plus, yi-dishwasher ekhuselekileyo.
Nciphisa i-clutter yasekuseni ngokwenza ikofu enomkhenkce ngobusuku obungaphambili.Icebo lokucoca kulo menzi wekofu ebandayo senziwe ngomnatha ocolekileyo kakhulu onceda ukuthintela ukungena kweendawo zekofu egayiweyo. Gcwalisa nje igumbi, yongeza amanzi, kwaye uyiyeke iphole iiyure ezisibhozo.
Ukuba i-closet yakho igxininisekile, cinga ukongeza lo mququzeleli we-closet ojingayo.Yenziwe ngelaphu elilukiweyo elomeleleyo, libonisa imigqomo emihlanu enokuthi ihlelwe kwiishelufu kunye needrowa ezinobungakanani obuhlukeneyo.Ii-hangers ezimbini phezulu nazo zinceda ukuqinisekisa ukuba iyunithi ihlala kwindawo ngaphandle kokujija. .
Ngubani othi ukucwangciswa akunakuba mnandi? Ezi kliphu zentambo yerabha zisonga iintambo zakho ngokugqibeleleyo kwaye uzibambe endaweni, ukuze wenze isikhululo sokutshaja se-DIY naphi na.Zincamathele nje apho ufuna khona usebenzisa incatho efakwe ngasemva. Yithi ndlela-ntle kwiintambo ezihlala zityibilika kwidesika yakho.
Ukuzama ukusonga iintambo ngokuchanekileyo kunokuba ngumsebenzi, ngakumbi kwihlabathi lanamhlanje apho phantse yonke into ineengcingo (kwaye awukhumbuli ukuba loluphi ucingo oluhamba nesiphi isixhobo).Faka ezi ntambo zokuqhoboshela ezinombala.Zivalwe ngeVelcro - kwaye ngenkqubo yombala efanelekileyo endaweni, unokwabela blue to cables TV, ebomvu kwifowuni ukutshaja iintambo, njalo njalo.
Ayineli nje ukuba le nqaba yokukhusela ine-9 AC yokuphuma, ikwanayo nezibuko ezi-4 ze-USB, ngoko awuyi kujijisa ukufumana iadaptha zezixhobo zakho ezixhaswe yi-USB. yibeke phantse naphi na kwindawo yakho.
Izixhobo ezinjengeemophu, imitshayelo, kunye neeraki kunokuba nzima ukuzigcina, nokuba kusegaraji okanye ekhitshini. Ukunqanda ukuzifaka zonke kwiimfumba ezingazinzanga ezikoneni, zama le mop kunye nesibambi somtshayelo. Inezibiyeli ezine ezilayishwe entwasahlobo izibambo irabha ezisebenzisa utsalo ukugcina isixhobo sakho ngokuqinileyo endaweni.Ibhonasi: Kwakhona ine amagwegwe ezine ukuxhoma izinto ezincinci.
Uyakwazi ukulahla iibhotile zeplastiki ezisetyenziselwa ukusetyenziswa kwakhona kwezi carafe.Zenziwe ngeglasi engqindilili ye-3mm kwaye nganye ibandakanya umkhono we-neoprene onemibala wolawulo lobushushu.Nokuba uzisebenzisa xa uhamba okanye ugcina ulwelo efrijini, ziya kuba luncedo. Ukongezwa okuguquguqukayo kwikhitshi lakho.
Le ngxowa yokugcina umthamo omkhulu yindlela egqibeleleyo yokucwangcisa amaphepha angaphezulu kwiindwendwe okanye iimpahla zonyaka ongazinxibi ngalo lonke ixesha.Ingxowa nganye iza nezibambo eziqinisiweyo kunye ne-zipper eneendlela ezimbini ezenziwe ngentsimbi eyomeleleyo. zenziwe ngelaphu kuphela, ziphinda zigobe zicaba xa zingasetyenziswa.
Ngamanye amaxesha ukuchithwa kumalunga nokonga indawo ekhayeni lakho, kwaye yeyiphi indlela engcono yokwenza oku kunemveliso eyenza umsebenzi ophindwe kabini? Esi sibane esisecaleni kwebhedi ye-combo kunye nesithethi seBluetooth senza oko. tshintsha imibala ukuze wenze i-ambience yesiko. Bhangqa ifowuni yakho ngeBluetooth kwaye ulungele ukuhamba.
Unako ukucoca ukuchitheka kwekofu yekofu ngesi sibambi sekofu esincamathelayo. Sula nje iteyiphu yokuxhoma ye-3M kwaye uyincamathisele naphina kumenzi wekofu ofuna ugcino olongezelelweyo.Ingxowa nganye iza nezibambi ezibini, ezinokugcina ukuya kutsho kwi-10 ikofu. imidumba.
Ukulungiselela kunokuba ngumngeni ukuba uphelelwa yindawo yokugcina ikhaya lakho.Nangona kunjalo, ngesi sikhululo soku-ayina emnyango, unokudala indawo yeemfuno zakho zokunakekelwa kwempahla nokuba awunayo indawo yokuhlamba impahla.I-wireframe inceda ukuxhasa intsimbi kunye nebhodi yoku-ayina kwaye ayifuni nayiphi na indibano okanye ufakelo.
Ukuphelisa i-clutter emnyango ngolu donga lwe-imeyile olufakwe eludongeni.Ngegumbi elinye, ishelufu enye kunye neentsimbi ezisibhozo, le yunithi inceda ukuqinisekisa ukuba izitshixo zakho zisoloko zifikeleleka, iidyasi zakho zixhonywe kakuhle kwaye iposi yakho igciniwe.Indawo yokumisa yenziwe yenziwe. yokhuni kwaye iyafumaneka kwiitoni ezahlukeneyo zomhlaba ukuze ukwazi ukulungelelanisa ngokulula nendawo yakho.
Ukufumana indawo yepod yekofu eyongezelelweyo kunokuba luqili ukuba umfutshane kwindawo yekhawunta ekhitshini. Le drowa isombulula loo ngxaki kuba yenzelwe ukuhlala ngqo phantsi komenzi wekofu yakho. , kwaye iyaqengqeleka emva naphambili ukugcina umatshini wakho ufikeleleka lula.
Ngokuxhomekeke kwindawo yokuphuma, ngamanye amaxesha uqhaga isixhobo sakho ekutshajiseni kuphela ukuze ufumanise ukuba asinandawo yokusibeka.Le rakhi yokuphuma iyatshintsha njengoko ikunika indawo yokugcina izixhobo zakho.Ikwahambelana neziseko ezininzi: susa nje. ikhava ekhoyo, jija iyunithi, kwaye ulungile ukuba uhambe.Ifumaneka ngombala omnyama nomhlophe.
Lo mququzeleli wesikhumba unamacandelo amahlanu obude obahlukeneyo ukuze abonise ngokulula zonke iipeni zakho, iibhrashi zokwakheka kunye nekude ye-elektroniki xa uyifuna.Ngaphezu koko, uninzi lwabahlalutyi bayayithanda: Inophononongo olunomtsalane lweenkwenkwezi ezi-4.8 emva kokungaphezulu kwe-3,500 yeAmazon. abasebenzisi bathathe inxaxheba.
Ukuqokelela izithambiso kunokuba mnandi, kodwa ziyakwazi ukujika zibe yi-mess ekhululekile ekuhambeni kwexesha.Zama lo mququzeleli we-makeup ukugcina izimonyo zakho ziphantsi kolawulo.Ibonisa iidrowa ezintathu kunye namagumbi asibhozo aphezulu obubanzi obuhlukeneyo ukulungiselela ubungakanani bemveliso eyahlukeneyo.Ngolwandle lwayo lwe-chic i-foam eluhlaza, iya kujongeka i-stylish kungakhathaliseki ukuba uyibeka phi.
Ukuba uzifumana usokola kwi-cereal endala kwaye awukwazi ukuxela umahluko phakathi komgubo kunye nesoda yokubhaka, ezi zikhongozeli zokutya ezingangeni moya zinganceda.Umyalelo ngamnye ufika kwizikhongozeli ezisibhozo ezinobungakanani obuhlukeneyo kunye neelebhile ezininzi, ezipakishweyo ukunceda ukonga indawo yekhabhinethi. Ngaphezu koko, isiciko sinqakraza ngokuqinileyo endaweni ukuze sitywine ngobutsha.
Thintela ukutshixa ngempazamo okanye ugcine izitshixo ezisecaleni zomgcina umntwana ngeli litye lobuxoki lifihla izitshixo. Lenziwe kwintlaka ejongeka ngokwenyani, eli khonkco lihambelana nobukhulu, imilo kunye nobunzima bamatye okwenene. yibeke kwindawo ekhuselekileyo.
Ukugcina ikofu isentsha iye yaba sefashonini.Le mbiza yekofu ingasetyenziselwa ukugcina iimbotyi zekofu okanye iindawo zekofu, yenziwe ngentsimbi engatyiwa yi-304, ayingeni moya kwaye inemitha yokutyibilika ngaphezulu ukuze ungaze uyilibale ukuba yayigqibele nini. izaliswe.Ide iza necephe eluncedo kunye neholster ecaleni.
Ukuba awunaso isicwangciso sokugcina iingxowa zeplastiki zegrosari, zinokuphalala ngokulula kwiidrowa zasekhitshini okanye kwiikhabhathi. slot ngaphambili njengoko kufuneka.
Ubuchule bokucoca igumbi lokuhlambela kuhamba umgama omde ukuya kwikhaya elilungelelanisiweyo.Unganciphisa ukuvaleka kweshawari ngokuqala ngale plug yedreyini.Yenziwe ngesilicone ebamba iinwele phambi kokuba ivale isinki, ukuze ukwazi ukuyicoca ngokulula.
Ukugcinwa ngaphantsi kwe-sink kunqabile ukusebenzisa indawo eyongezelelweyo ethe nkqo, kodwa unokutshintsha oko kunye nomququzeleli ongaphantsi kwe-sink.Umququzeleli uyanda kuwo onke amacala (ububanzi, ubude kunye nobunzulu) kwaye uxhasa ukuya kwii-lbs ezingama-40. imibhobho kwakhona.
Ukuba awukho 100% wokulayisha kunye nokukhulula i-dishwasher yakho, kulula ukulibala ukuba izitya ngaphakathi zicocekile okanye zingcolile. ihlanjwe.Iyi-intshi ezi-3.5 ububanzi kwaye kufuneka ingene lula kwiiwasha ezininzi.
Ukuba ujonge ukongeza i-hydration yemihla ngemihla ngaphandle kokusebenzisa iibhotile zamanzi zeplastiki ezininzi, zama le bhotile yamanzi enesiqhamo ukuze ufezekise iinjongo zakho zemihla ngemihla kwaye ube neentlobo ezahlukeneyo. ngokukhetha kwakho.Gcwalisa ibhotile ngamanzi, buyisela i-infuser, kwaye ungcangcazele.
Yithi ndlelantle kumgca wakho wamadlavu ongahambelaniyo kwaye uthi molo kule seti ye-silicone mitts ezine ze-oveni kunye nezibambi zembiza. Zenziwe ngesilicone ekwaziyo ukumelana nobushushu kwaye zinezithinteli ezenziwe ngendlela ekuvumela ukuba uphathe izitya ezishushu ngaphandle kokwenza itoni yempahla eyongezelelweyo. .Hlala nje ngesepha namanzi kwaye zifana nezintsha.
Ewe, kwanemisebenzi yakho yolonwabo ingalungelelaniswa ngakumbi: umkhomba-ndlela ocacileyo unceda ekuqhubeni xa uphume ngebhayisekile (okanye mhlawumbi usendleleni eya emsebenzini). Oku kunyuswa kwefowuni yokumelana nemozulu yebhayisekile yakho kunamandla okubambelela alungele nakuphi na. i-handlebar kwaye iyahambelana neemodeli ezininzi ze-iPhone kunye ne-Android.Ide ijikeleze i-360 degrees ukuze ukwazi ukujonga isikrini ngokuthe tye okanye ngokuthe nkqo.
Ukugcina ikhitshi lakho licocekile kwaye licwangcisiwe lihlala lihamba ngesandla.Lo nogada we-splash ubonisa isikrini se-mesh kwaye siyahambelana nobukhulu obahlukeneyo beembiza.Zigqume ngokulula ipani ngelixa uqhotsa ukunqanda ubumdaka begrisi.Isiphatho, siphathwa nge-silicone ekwazi ukumelana nobushushu , isonge ngaphakathi ukuqinisekisa ukuba sikhuselekile umatshini wokuhlamba izitya.
Ixesha lokuposa: Mar-12-2022